Goridhe Vateveri Apk Dhawunirodha Ye Android [Insta Tool] - Luso Gamer
Vateveri veGoridhe Apk Dhawunirodha Ye Android [Insta Tool]
Instagram yakakurumbira kuburitsa zvakapfuma zvemukati pamwe nepuratifomu yakanaka yekuwana. Nekuwana vateveri vasingaperi kuburikidza nekushambadzira uye mamwe manomano. Nekudaro, maitiro atiri kutaura pano anodhura chete. Saka tichitarisa kuwanikwa kwemahara pano isu tinopa Vateveri veGoridhe.
Chaizvoizvo, chishandiso ndechechitatu bato rinotsigirwa Android application yakarongeka yakatarisana nenhengo dzeInsta. Mazhinji enhengo dzakanyoreswa anokwezvwa pachikuva nekuda kwemikana inosvikika. Izvo zvakanaka maererano nekuwana uye kuvaka basa.
Nekudaro, kune vatsva, masisitimu anoita seakaoma uye akaoma. Nekuti iyo makwikwi level inoratidzika kunge yakawedzera. Saka tichitarisa kufarirwa kwevanhu nerutsigiro rwavo. Apa tadzoka nezvinoshamisa izvi Vateveri Vemahara tool.
Chii chinonzi Goridhe Vateveri Apk
Goridhe Vateveri Android chishandiso cheAroid chakagadzirwa tichifunga nezve Instagram nhengo. Chinangwa chekugadzira iyi inonakidza application ndeyekupa zviri pamutemo uye zvakachengeteka sosi. Kuburikidza nevatsva uye vanotanga vanogona kugadzira vateveri vasingaperi.
Kunyangwe Instagram yaive yakarongeka yakatarisa zvirimo uye kutaurirana. Asi nekufamba kwenguva, chikuva chinova chitubu chikuru uko vashandisi vanogona kuwana ruzivo rune zvibereko. Nyangwe tsvaga zvinovaraidza zvinopa mufaro mahara.
Kunyangwe vanhu vanowana mari yakanaka kuburikidza nepuratifomu vachishandisa zviwanikwa zvavo sevaoni. Nekudaro, kukwezva iwo makambani ekushambadzira kunoda vakawanda vanoona nevateveri. Maitiro ekuwana iwo ekuona akaoma
Nzira yepamutemo inononoka uye inoda mazana emadhora ekudyara. Izvo zvinodhura uye hazvigamuchirwi kune vashandisi veAndroid. Asi tichitarisa kutsigirwa kwevanhu, vagadziri vakaunza iyi mhinduro huru. Ikozvino kubatanidza ichi chimwe chete chishandiso kuchabatsira kuwana ipapo maonero pamwe nevateveri mahara.
zita Vateveri vegoridhe
zera 2.7 MB
Package Zita com.goridhe.vateveri
Inodiwa Android 4.2 uye Uyezve
Rangarira iyo application inouya nemikana yakawanda yakasiyana. Izvi zvinosanganisira kuwana Mahara Anoda, Maonero nezvimwe. Kunyangwe kuwana masevhisi iwayo kunoonekwa sekureruka uye hakudi hunyanzvi hwehunyanzvi. Zvese zvavanoda kuita kungoisa imwe chete app.
Patinoongorora application muchidimbu, takawana akawanda akasiyana sarudzo. Izvo zvinosanganisira Akapfuma Zvikamu, Sefa Yekutsvagisa, Kutumira Kurongeka, Anti-Block, Anti-Image nezvimwe. Kune akawanda matema anowedzerwawo kune yakasarudzika chiitiko.
Avo vasina kugadzikana nemutauro weChirungu. Iye zvino unogona kuchichinja uye kugadzirisa nyore mutauro wakasarudzika kubva pakuseta sarudzo. Mukuwedzera tinokanganwa kutaura nezve maitiro ekuwana ma likes emahara. Vashandisi vangangoda mari yegoridhe yekugadzira masevhisi.
Mari yacho inowanwa yakananga kupedza mabasa akareruka. Kuwanda kwaunowana mari yegoridhe, ndiko kuwedzera kwemahara kufarira uye maonero anogona kuitwa nemushandisi pamusoro peakaundi akawanda. Kana iwe uchifarira application uye wakagadzirira kuwana ipapo masevhisi.
Wobva wadyara mari kuti utenge mari yegoridhe uye ugadzire zviri nyore iwo maInsta Likes plus maonero. Mumazuva anouya iyo auto comment sarudzo ichave iripo yekusarudza. Saka iwe wakazvipira kutora mukana wemukana woisa Goridhe Vateveri Dhawunirodha.
Kubatanidza iyo app kunopa akasiyana mashandiro.
Izvi zvinosanganisira Mahara Anoda, Maonero uye Muteveri.
Auto Comment sarudzo ichave inowanikwa mumazuva anouya.
Hapana kushambadzira kwakananga kunobvumidzwa mukati meapp.
Insta Login zvitupa zvingada kuti uwane huru dashboard.
Maitiro Ekurodha Goridhe Vateveri App
Kana tikataura nezve kurodha yazvino vhezheni yeApk mafaera. Vashandisi veAroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu, nekuti pano pawebhusaiti yedu, tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuti tive nechokwadi chekuchengetedzeka nekuvanzika kwemushandisi, takahaya timu yenyanzvi.
Chikwata chehunyanzvi chinoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi chekushanda kwakanaka isu hatimbope iyo Apk mukati yekurodha chikamu. Kuti udhawunirodhe yakagadziridzwa vhezheni yeApk ndapota tinya pazasi-rakapihwa link.
Isu takatoisa application pamidziyo yakasiyana. Mushure mekuisa iyo app hatikwanise kupupurira chero dambudziko rakakura mukati mekushandisa. Zvakadaro isu hatimbove varidzi vekodzero, saka kana chero chinhu chikaitika tichishandisa app saka isu hatizove nemutoro.
Mazhinji emamwe ma Instagram ane hukama maapplication anoburitswa uye akagovaniswa pano. Kuisa uye kuongorora iwo mamwe akanakisa mamwe maapplication ndapota tevera zvinongedzo. Zviri Malu Vateveri Apk uye Bold Vateveri Apk.
Kana iwe uchida kugadzira zviwanikwa zvisingaperi seLikes uye Maonero pasina kutambisa nguva. Ipapo isu tinokurudzira avo vashandisi venhare kuisa Goridhe Vateveri Apk. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Categories Tools, Apps Tags Vateveri Vemahara, Vateveri vegoridhe, Goridhe Vateveri Apk, Goridhe Vateveri App, Vateveri Vegoridhe Dhawunirodha Post navigation
DS Tunnel Apk Download For Android [VPN Tool 2022]
Hincha Play Apk Dhawunirodha Ye Android [Live IPTV]